निशान न्युज श्रावण १०, 2074
काठमाडौं । आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट चेपुवामा परेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न सकेनन् । आज मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेर ४ बजे सपथ खुवाउने देउवाको योजना थियो । तर, बरिण्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले खोँचे थाप्दा देउवाको योजना पूरा हुन सकेन ...
५१ औं दिनपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तारको त...
श्रावण १०, 2074 काठमाडौं । आफु प्रधानमन्त्री बनेको ५१ दिनपछि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद बिस्तारको तयारीमा लागेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानीका कारण देउवाले लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न सकेका थिएनन् । तर, चौतर्फी वि...
डा. भट्टराई भन्छन्, खै किन उहाँहरुले ...
श्रावण ९, 2074 काठमाडौं । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकता गर्न लामो समयसम्म कसरत गरेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफुले चाहेर पनि एकता हुन नसकेकोमा दुःख मनाउ गरेका छन् । उनले आ...
← अघिल्लो 12… 257 258 259 260 261 262 263 264 265 … 271 272 पछिल्लो →